Mandroso, mihemotra, miankavia, miankavanana ! | NewsMada
Mandroso, mihemotra, miankavia, miankavanana !
« Ny Mpikambana mahefa nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana androany talata 24 jolay 2018 teto amin’ny lapan’ny Akademia malagasy, Tsimbazaza, dia nanapaka, araka ny maha fahefana faratampony sady mpametraka fenitra azy eo anivon’ny Akademia Malagasy, fa : momba ny fomba fanisana amin’ny teny malagasy, ny fandaharana ny sokajin’isa dia atomboka amin’ny sokajin’isa lehibe indrindra, midina miandalana ary miafara amin’ny sokajin’isa kely indrindra». Io ilay fanapahan-kevitra miteraka resabe sy fanakianana mivaivay amin’izao fotoana izao.
Avy any ankavia no miankavanana, hono, ny tokony ho izy. Vakina mandroso sa vakiana mihemotra ny tena izy amin’izy ity e? Ny mankaiza ny mandroso ary ny mankaiza ny mihemotra ? Hanao ahoana ny fiantraikan’io amina lafin-javatra maro toy ny tontolon’ny fampianarana, ny varotra sy ny fifanakalozana, ny fiainana andavanandro iray manontolo mihitsy ? Hitondra fanovana tahaka inona ny fampiasana io fomba famakiana tarehimarika avy ankavia miankavanana io ? Tena mahamaika sy laharam-pahamehana ve ity fanovana ity ? Ampahana fanontaniana naloakan’ny vavan’ny olona ihany ireo. Tsy azo hajanona hatreo anefa fa mitaky valiny mba hahamarin-toerana ny fanovana kasaina hatao.
… Amin’ny lafiny iray, voaporofo amin’ny zava-mitranga tahaka itony fa manana mpikaroka i Madagasikara. Lafiny hafa indray, tsy azo hadinoina fa leom-boananan’ny omaly ny Malagasy ka tsy tia zava-boribory intsony. Nitondra nankaiza, ohatra, ny « fanagasiana » notanterahina tany anivon’ny fampianarana ?
… Tsara ny fananana voka-pikarohana tahaka itony, saingy mila fitandremana fatratra ny fampiharana azy. Goavana indrindra amin’izany ny fandraisana fepetra mifanaraka amin’ilay fanapahan-kevitra mba tsy ho sanatria ka fanapahan-kevitra bontolo na hikendry tombontsoa ho an’ny « hafa » indray no hotanterahina !
Sa ve efa voadinika avokoa izany fa ny vahoaka no be ahiahy ? Asa aloha fa hiaraha-mahita eo ?